99 Nzvimbo yeBFF Maggot Ranch • Yurie BSF
Nzvimbo ye BSG Maggot Farm kunze kwekunzwa
Unoda kuziva maggotti ekudzidzira uye nzvimbo yepedyo yezuva ranhasi, isina kusvuta BSF Maggot irima muguta rako?
Nzira yacho iri muvharidzimu isina chinhu iyo guta rauri ikozvino.
Nzira yeBurf Maggot Cultivation
Nzira yakarurama yekukudziridza Magfot BSF kuwana mutengo wekutengesa Maggot inokurukurwa zvakakwana kubva pakugadzirirwa kwevhaji dze BSF, pakukohwa magog.
Kune nzira dzakawanda dzokudzidza BSF magot cultivation, iyo inowanzove yekuzviongorora-kana kudzidzira-kudzidziswa nedzimwe nzira kuburikidza nokutora kurairirwa kwekurima.
Panewo nzira dzekudzidza Maggot BSF kukura nekubatana nemapoka kana mharaunda. Nzira imwe neimwe inobatsira uye inokanganisa.
Ingosarudza iyo inonyatsokodzera "style" yako. Mamwe akareruka kunzwisisa zviri nyore nekuverenga, vamwe vanoda kudzidza nekuona mavhidhiyo emitambo, uye vamwe vanoda kushandisa zvakananga purazi.
Nzira yekukuridzira magf BSF chero ipi zvayo yauri kuita yakanaka. Chero bedzi iwe wagutsikana nemigumisiro. uye zvechokwadi migumisiro apa inokwanisa kusangana nemhuka yekudya zvidikanwi.
Mushure mokunge iwe uine maggot, kunze kwemhuka yako pachayo inofudza zvido zvako, iwe uri kutengesa maggot kana iwe zvaunoda iwe pachako zvazadzikiswa. Kunze kwekuita maggot bsf nzira yekurima, kukura magota kunowanikwawo maererano nehuwandu hwebhizimisi.
Musha Wemagetsi Kugadzira
Makambani emabhizimisi eGagot akaparadzaniswa mudiki (kumba), pakati nepakati nemaindasitiri. Kubva pane zvakaitika kune zvakakosha kutanga pamusana muduku kana wemusha kutanga, kunze kwekuti guta guru harisi kurema, chinhu chinonyanya kukosha ndechekuti iwe unotanga kunzwisisa zvinonzi ins uye kunze kwekurima maggot kweBSF.
Mukugadzirisa mushure mekurima magot kuburikidza nemitambo yechitatu uye yechina uye nezvimwewo, ipapo kukura kwemagetsi kunowedzera kunakidza uye kunounza migumisiro.
Iva nemoyo murefu kana uri mumagetsi imwe, maviri neatatu, paunenge uri pakati pekudzidza, hazvikurudzirwe kuti udye tani imwe pazuva kana iwe usiri kuwana kg imwe pazuva.
Zvakanaka kutsvaga kuva yakanyatsogadzirika asi kugadziriswa kumano ega, zvinhu, zvinhu uye vamwe vatsigiri.
Kana iwe uri mufananidzo unoda kudzidza iwe pachako, tapota tevera mutungamiri akazara kubvira pakutanga kutengesa uye kutengesa maggot BSF
BSF Maggot Management Guide
Zvose Gwaro Rekushandisa Kwokukudziridza Maggots
Nzira yekuita maggot muzvipfuwo zvekudya
(Pasta Maggot, Maggot Maruva, Pelgotti yeMaggot)
Mibvunzo neMhinduro pamusoro pekukura Maggots
Sarudza Maitiro Akananga muRussia
Pane 99 More Nzvimbo Yemazuva Ano BSF Maggot asina Smell
Asi kana iwe uchida kudzidza nenzira inoshanda uye pakarepo kune mhinduro. Iwe unogona kudzidza nekuuya kuzoita zvakananga papurazi muguta riri pedyo newe. Iwe unongosarudza guta riri pedyo kuti udzidze nezvemhando dzisina kunaka dzemazuva ano dzekurima maggot maggot.
Kukura kweMagumasi uye Makuru Marefu Maggots
Kutanga chirongwa chepakati uye yakawanda bhizinesi rezvipfuwo, zvirokwazvo unofanira kugadzirira zvinhu zvose zvakakura uye zvakarongwa.
Nokuti kutanga kutora zviyero zvemagetsi iwe haugone kuzviita nyore nyore uye kuedza. Mukuwedzera pakupedza nguva, simba uye pfungwa, zvechokwadi zvimwe zvakashata ndezvemari.
Hazvirevi kuti mutoro wepfungwa nekuda kwekukundikana huchaguma mukusava akanaka kune ramangwana rako. Ndeapi matanho anoda kuongororwa uye kuva hanya nesu patinenge tichitsvaga bhizinesi remagogetsi pachiyero?
Chinhu chokutanga chaunofanira kuita ndechokuita purogiramu yemusha pakutanga, wozvigadzirire imba kana huru. Nokudaro kuti ruzivo ruzivo runova nheyo dzedu dzekutanga pakuvandudza bhizinesi rekugadzira maggot rinotevera.
Zvimwe zvinhu zvehutangi usati watanga bhizinesi yatinofanira kufunga nezvazvo ndei:
Kuvapo kwezvipingamupinyi, zvinoreva kuti panofanira kuva nekugadzirira mupfungwa uye kuronga kugadzirira izvo zvakanyatsokura kuitira kuti bhizinesi risina kunakisa bhizinesi rinogona kufamba zvakanaka.
Zvinhu zvatinofanira kuita tisati tatanga bhizimisi zvinobva
Kuzvikurudzira iwe pachako kuti bhizinesi rekurima maggot zvirokwazvo inogadziriswa mukuzvidziridza iwe uye mune mari mune zviri nani munguva yemberi.
Kuunganidza guta guru rebhizimisi reBFF
Ita bhizinesi rebhizimisi.
Pano Ndezvimwe Zvinhu Zvinokosha Zvinoda Kugadzirira
Kushanda pamwe chete
Kana tikaita bhizimisi rega rega kana kuti rega, hapana chikonzero chekuwana bhizimisi. Asi kana tichida kuvaka kambani, saka iwe unofanirwa kuvaka svondo rakabudirira.
Tanga nekutsvaga vanhu vanogona kuvimbwa, kushanda nesimba uye nzvimbo vanhu vakarurama panzvimbo yakarurama.
Tarisa Pakusarudza Maggot Business Business Type
Zvisarudzo zvakawanda mubhizinesi rekugadzira maggot, pakutanga kwekutanga unofanira kufamba nenzira yekugadzira maggot production inobudisa yakawanda uye yakawanda masvora.
Kwemazuva mazhinji, iva nechokwadi chokuti wakavaka bhizinesi rekurima reBFF remazuva ano pasina kunhuwa. Imwe bhizinesi chinhu chekuchengeteka uye kunyaradzwa kwekuchiita ikozvino kwemakumi emakore anouya.
Kana kugadzirwa kwemagetsi ako kuchiri kunhuwa, kuronga kuitira kuti irege kuunza matambudziko kuvanhu. Vazhinji vanoita maggotti vezvematongerwo enyika vasina kuisa mberi kwekuchengeteka zvino vava kutovharwa nekuda kwekuratidzwa kwemunharaunda.
Mushure mekukwanisa kukudziridza maggot kunze kwekunhuhwira, danho rinotevera nderekuisa pfungwa pazvizivo mubhizinesi remaggot.
Heano maMaggot Business Derivatives Products
- Kirasi A Organic Liquid Fertilizer
- Chikoro B Organic Liquid Fertilizer
Chikoro A Organic yakasimba fertilizer
Chikoro B organic yakasimba fertilizer
Maggot Animal Feed (Maggot Pasta, Maggot Mafuta Maggot Pellet)
Agro Industry (Cosmetics, Processed Other Factories, Kuvaka Dzimba Zvokudya)
Zvinhu zvose zvinogadzirwa uye bhizimusi rine mukana wakanaka kwazvo, tarisa kuongorora kuti mamiriyoni emadhora emafisi ekudyisa mhuka akakupoteredzai.
Izvi zvinoratidza kuti hukuru hunogadziriswa nemhuka hunobatsira sei bhizimusi.
Sarudza uye uronga rudzi rwebhizimisi raunoda kupfuura naro, fungisisa usati wasarudza. Musatitendera kusarudza zvisina kururama nokuti tinotevera.
Ndezvipi zvigadzirwa kana mabasa unoda kupa? Kuparidzirwa kwakadini? Iwe unoitengesa sei? Ndivanaani vanhu vachanomhanya? Mutengo wokukwikwidzana unotengesa chii? Unokurudzira sei?
Uyewo gadzirai nzira yekugadzira michina yekugadzira seyakanaka sezvinobvira mumaziso evatengi. Ronga uye gadzirira usati watanga bhizinesi remaggot.
Ziva Maggot Market (SWOT)
Ita tsvakurudzo uye uite kugadziriswa kwemashamba kuti uone kuti ndiani chikamu chako chemusika, kunyanya avo vachava soko rekutsvaga yebhizimusi renyu rebhizimusi.
Tsvaga misika yako yepamusi uye maonero pamusoro pebhizimisi remaggot waunenge watanga kutanga. Uye zvisinei zvakakosha kune vakwikwidzana varipo kuti vagadzirire matanho ekukunda misika.
Kusarudza Bhizinesi Zita
Mazita ebhizimisi anonyanya kukosha mubhizimisi. Sarudza zita iro rakajeka kukuyeuka uye rinomiririra basa reBSF riri kuitwa.
Capital Resources Ndeipi bhizinesi rako rezvemari? Icho chinobva kumunhu wega here kana kuti kubatana kukuru? Kana mari yaunoronga isiri 100% yemari yemunhu.
Ipapo iwe unogona kutaurirana nhengo dzehurumende dzinopa rubatsiro rwemari dzakadai se:
Borrow kubva kuBhangi
Borrow kubva kumhuri
Borrow kubva kune shamwari
Borrow kubva kwamuri
Kugadzira Hurongwa Hwebhizimisi
Sangano rebhizimisi nderekudhindwa kwebhuruu kwebhizimisi rako, kuronga, kusika chiratidzo chekambani uye chinangwa, uchiita chinangwa chako chaunoda kubudirira?
Rongedza hurongwa hwekusimudzira nekutengeserana kwemiti yakakodzera yemaggot kuti ive chikamu chemusika wekudyisa mhuka nezvimwewo.
Ita hurongwa hwebhizimisi zvakanyatsonaka, kuti urege kuita kuti zvive zvakaoma kana uchirarama. Nokudaro bhizinesi rako rakajeka pamusoro pehutungamiri uye chinangwa uye nguva yaro yekubudirira.
Kusarudza Bhizimisi Nzvimbo
Maggot bhizinesi rebhizimisi iri kutsvaga nzvimbo yakarongeka. Tsvaga nzvimbo dziri nyore kuwana matanho,
Pedyo nemasikirwo emasikirwo ehutachiona uye maggotti ekudya, vane zvigaro zvekushandisa zvakakwana uye zviri nyore kuwana basa.
Sarudza vashandi zvakanyatsonaka. Chimwe chinhu chinokosha pakubudirira kuburikidza nekuwana vashandi vasingakwanisi kushanda asi vanogona kuvimbwa.
Makambani akawanda anopedzisira apera nekuda kwe "munhu" mukambani inoparadza uye inotakura bhizinesi rinorarama muzita rayo.
Kutarisira Maggot Business Business Permits
Bhizimisi rebhizimisi ndechimwe chinhu chepamutemo pamberi pemutemo uye uchapupu hwokuti iwe uri mugari akanaka nekubhadhara mutero webhizimisi gare gare.
Dzidza uye unzwisise mabasa ekurima maggot kubva pakugadzira muviri uye zvinyorwa uye matanho achaitika mune ramangwana apo uku kurima kunotanga.
Ita Cage iri BSF-like
Bhuku re BSF semhashu inobhururuka kana ichibvarura uye ichibereka kuitira kubudisa mazai akawanda.
BSf kubereka chikamu chakakosha chinodikanwa kutsigira kushanda zvakanaka kwemabasa ekurima BSF.
Nzira yakakodzera uye BSF inosarudza ichabatsira kubvisa mazai eFBF uye kubatsira kubatsira zuva nezuva kuchengetedza BSF, kusanganisira nzvimbo dzekuvaka dzinofanana nenzvimbo yekugara yemhashu mutsvuku inobhururuka kana kuti muto weshefu anobhururuka.
I-BSf enclosure inogona kukwanisa kuumba nyaradzo ye BSF. Cage criteria inofanirwa ne BSF:
BSF Zvinyorwa Zvisungo
Chimiro chakanaka (urefu x kubhiti x kukwirira uye kukwirira kwegumbo reJFF gumbo)
Kuti uwane mamwe mashoko, ona vhidhiyo yemavhidhiyo kuti ungazviita sei cage iyo mutezi wevarwi anobhururuka achida.
Kurima Zvimwe Zvishandiso uye Zvigadzirwa Kugadzirira
Imidziyo inokosha uye midziyo zvakare kuitira kutsigira kushanda zvakanaka kwekurima. Zvombo uye midziyo yakadai seyi:
Kuwanika kwemahara mahara,
Zvokudya uye kunwa nzvimbo yeFlies Flies,
Maggot kuwedzera nzvimbo,
Egg uye mazai evha
BioTong mapuranga ekuwedzera
Zvokudya uye Maggot Cultivation Media
Chimwe chikuru zvebasa honye kurima ndiko zvipfuwo zvokudya mutengo mumari kusvikira 82% of zvachose mutengo kugadzirwa chikafu hove uye shiri Terk nesimba.
Saka shandisa zvokudya zvisingabhadharwi uye magidhi ezvinyorwa zvakadai sedhaka yemumba, shishi yekicheni, mashizha emisika mumhando yemiriwo nemichero.
Other Vezvenhau vanogona kuva mupfudze wenyika mombe, mbudzi, tsuro, duck, zvihuta huku mupfudze yenguruve namabhiza etc.
Feed Feed uye Media
Zvokudya uye vhidhiyo zvakanyanyoenderana nekukura zvakakura nekubudirira kwe magot uye mari inobudirira.
Zvokudya zvinotakura basa guru mukukura kwemakumbo nokuti kudya kwakakwana kunobatsira kukura kwemapuranga nokukurumidza uye kuwedzera.
Kukudziridza mazuva ano BSF mavanga pasina kunhuhwa hazvisi zvakaoma, asi zvakadaro zvinoda kutarisira kwakakodzera. Kunyanya kana kukura uku hakusi kungoedza uye kukanganisa.
BSF mazai evanosvitsa mhizha anogona kuva echinhu chero chipi zvacho uye inowanzogadzirwa nemabhokisi mashoma akadai semabhasi uye trays kana nenzira yekona mabhokisi.
Pano mazai eFBF anotsvairwa mumagote uye achiendeswa kuBooTong kuwedzera ...
Gadzirira nzvimbo yekudzivirira uye rakafuridzirwa kuti uise tray zvakanakisisa uye zviri nyore kutarisa nekuchengetedza zuva rega rega.
BioTong kushandiswa mune svikiro-pamwero emakambani zvechokwadi rakasiyana musha pamwero, asi pfungwa ndewokuti apo BioTong vane 2 mhando BioTong pasina murwere sezvo muduku honye nokurera svikiro uye BioTong pamwe murwere sezvo utuk vaitamira mudziyo prepupa.
BioTong Kukura kumamiriro Kuwanikwa panyika, riri neatly Ronga uye gadzirira ubate kuti vakurise uye kuwedzera BioTong kana chirimwa riri kukura.
Isa Kuwanikwa dyisa uye nhau utariri honye vanofanira kunyatsogadzirira, nyaya svikiro iri muchimiro makemikari tsvina, mupfudze kana chirimwa matongo kuti vane tsika kunhuhwa.